Ikheli le-IP 192.168.8.1 ingabe i-IANA ibhaliselwe ukusetshenziswa kwangasese kuphela. Ngaphakathi kwenethiwekhi yendawo, nguwe kuphela ongasebenzisa leli kheli le-IP futhi alikwazi ukusetshenziswa kwi-Intanethi. Ungasebenzisa leli kheli le-IP 192.168.8.1 ngokuvula iphaneli yomlawuli we-router nokwenza izinguquko ezimbalwa kuzilungiselelo zayo ezizenzakalelayo. Izinguquko ezimbalwa ezinjalo zifaka phakathi ukushintsha iphasiwedi & igama lomsebenzisi, ukusethwa kwenethiwekhi, ukwengeza i-firewall, nokusetha idivayisi.
IP 192.168.8.1 isetshenziselwa ukuxhumana nezinhlelo ezahlukahlukene ngaphakathi kwenethiwekhi yangasese. Ibuye isetshenziswe ekumiseni amathuluzi wokuxhumana ngokwazisa inqubo yokungena.
Lungiselela i-Router ngokusebenzisa 192.168.8.1
Ngemuva kokuthi ungene ngemvume kusixhumi esibonakalayo se-router ngo-192.168.8.1, yisikhathi sokushintsha amasethingi ukuze wazi ukukhetha kwakho kokuqala. Izintambo ezinkulu zezinombolo nezifinyezo zingahle zibonakale zingenakufinyeleleka, kepha ungahle uphumule kalula ngokwazi ukuthi zonke izilungiselelo zingaphinde zisethelwe kabusha ngokuzenzakalela ngokucindezela inkinobho. Kepha kuyasiza ukwazi ukuthi ungaqala kuphi; yingakho into ebaluleke kakhulu okufanele uyishintshe yileyo mininingwane yokungena engenhla eshiwo ngenhla:
Khetha izilungiselelo ezijwayelekile zemenyu
Khetha iphasiwedi ye-router noma inketho efanayo enegama
Bhala iphasiwedi oyithandayo
Kufanele uthole igama lomsebenzisi le-router kwimenyu efanayo ongayishintsha ibe negama olikhethayo kuqala.
Shintsha Ikheli Lasekhaya le-IP 192.168.8.1
Ukusetha okunye ongafisa ukukuguqula ikheli le-IP lendawo, ngokuqhubeka ngomehluko phakathi kwekheli le-IP lomphakathi nelasendaweni elichazwe ngezansi. Uma uguqula ikheli lakho le-IP lendawo, Ngeke wazi ukuthi ungayithola kanjani i-router ngo-192.168.8.1, ngakho-ke kufanele uqinisekise ukukhumbula ikheli lakho lakamuva. Ukushintsha ikheli:
Vakashela imenyu yokusetha noma inketho enegama elifanayo
Shaya kuzilungiselelo zenethiwekhi yokukhetha.
Ngezansi kwezilungiselelo ze-router, bhala kukheli lakho le-IP olithandayo
Elinye lamakheli we-IP azenzakalelayo yi 192.168.8.1, kepha ngokungafani 192.168.0.1 or 192.168.1.1 akuvamile kakhulu ukuthi izinkampani zisebenzise leli kheli langaphakathi. Kuzoba okunengqondo ukusho ukuthi cishe bonke abayisebenzisi. Kalula nje le nto ayivumelani nabo, njengoba kunokusebenza okufanayo - kusetshenziswa ukungena kusixhumi esibonakalayo sewebhu somzila.
Ukushintsha igama lenethiwekhi ye-Wi-Fi
Ngokusebenzisa izilungiselelo zerutha yangempela elungisiwe, ungaqala ukuthola okungeziwe ngegama lenethiwekhi ye-Wi-Fi eyindawo enhle ukuqala. Isikhombi Sesevisi noma i-SSID igama elihlukanisa inethiwekhi ye-Wi-Fi yomzila kwabanye abasondele. Igama lingaba yinoma yini oyifunayo uma ingacasuli. Ngokuzenzakalelayo, igama lingahle livame kakhulu ukusiza ukusiza ukuhlukanisa inethiwekhi okufanele uyenze:
Vakashela imenyu yokusetha enye inketho enegama elifanayo
Hit on the option izilungiselelo ezingenantambo.
Bhala ngamagama wakho wenethiwekhi owathandayo ngaphakathi kwebhokisi le-SSID
Ngemuva kokushintsha igama lamanethiwekhi we-Wi-Fi, ungahle ulungise ne-password. Ibhokisi lephasiwedi lizoba kwimenyu efanayo njengegama lenethiwekhi.
Izilungiselelo ezingaphezulu zizokuvumela ukuthi uhlele ukuphepha kwe-router okubalulekile ukuqinisekisa ukuthi othile upheqa inetha ngenethiwekhi yakho wenza kanjalo ngokuphepha. Ukusuka lapha, wamukelekile ukuthola izinqumo zomzila wakho ngaphezulu. Ama-routers amaningi ahambisana nezilungiselelo zabazali ongazisetha, futhi bambalwa abazovumela ukusethwa kwamanethiwekhi amaningana noma iyiphi insizakalo ye-VPN.
Okuningi ku-IP 192.168.8.1
192.168.8.1 Lokhu kubizwa ngokuthi yisango, ikheli langasese noma lendawo le-IP elibhekwa njengeliphezulu kunethiwekhi ye-Wi-Fi. 192.168.8.1 Ithola ukusetshenziselwa ukufinyelela kokubili isikhombimsebenzisi se-router nokuvumela amadivayisi anekhono ukuxhuma ku-router. Ungahle ucabangele ikheli le-IP lomzila wakho njenge-PO Box ye-imeyili. Onke amaphakheji owathola ngeposi aqonde ngqo kwi-PO Box, yize kunokuba uqoqe, umzila wakho uzobe usuthumela okuthunyelwe kudivayisi ye-PC okuyifunayo.
Uma ungumnikazi wedivayisi ene- Uhlu lwe-IP & 192.168.8.1 ikheli elingalungile, uzothola iwindi lokungena ngemvume uma ulibhalile kubha yekheli lesiphequluli. Ngemuva kwalokho umane udinga ukusebenzisa igama lomsebenzisi ne-password ezenzakalelayo.
Ukuxazulula inkinga ikheli le-IP 192.168.8.1
Ngesinye isikhathi ngesikhathi, kuvamile ukubhekana nezinkinga ezahlukahlukene nge-router yakho. Uma ungakwazi ukudlula isikrini sokungena ngemvume, kunezinto ezithile odinga ukuzicubungula. Qinisekisa ukuqinisekisa ukuthi i-inthanethi yakho izinzile futhi ayishintshi. Enye inketho ukusebenzisa i-Command Prompt ukuthola isango elizenzakalelayo. Kungenzeka ukuthi usebenzisa ikheli elingalungile le-IP ukufinyelela i-interface yomsebenzisi. Ukuthola usizo olwengeziwe, ungaxhumana nomhlinzeki wakho we-inthanethi.
Kunezidingo ezithile okufanele sizilandele ukuze singene ngemvume kuleli kheli le-IP futhi senze ukulungiswa okudingekayo. Into ebaluleke kakhulu ukuba sendaweni yomzila wenethiwekhi noma ungene nje. Kumele sixhunyaniswe namanethiwekhi afanayo ne-router ukwenza ushintsho olubalulekile ku-firmware njengoba kuyikheli le-IP elikhethekile. Isithiyo esikhulu maqondana naleli kheli le-IP ukuthi alikwazi ukutholakala ku-WWW ngakho-ke kuyasiphoqa ukuthi sibe sendaweni yenethiwekhi ye-router ukuya kusixhumi esibonakalayo sewebhu. Isiphequluli sethu sewebhu kufanele sibe esiyinkimbinkimbi (i-Google Chrome, i-Mozilla Firefox, njll.) Njengoba le ndlela idinga ukwesekwa kwe-HTML5 okuzivelelayo.
Uma ungumlawuli we-router engeyekheli le-IP 192.168.8.1 bese kusetshenziswa ikheli le-IP 192.168.8.1, ungenza noma yiziphi izinguquko ezidingekayo kumzila wakho futhi ungashintsha nokusetha okuzenzakalelayo komzila wakho.
Ngaphandle kwalokho, ungenza okuningi okwengeziwe ngaleli kheli le-IP njengokuguqula amagama abasebenzisi, iphasiwedi, ukulawula izilungiselelo zenethiwekhi, ukumiswa kwe-firewall nokunye okuningi.
Nazi izici ezimbalwa ezivelele zekheli le-IP 192.168.8.1.
Ukuguqula iphasiwedi negama lomsebenzisi.
Ukulawula i-QoS nezilungiselelo zenethiwekhi.
Ukuvula nokuvimba i-End-Device.
Ukusetha i-Firewall nokusetha kokuphepha
Imodi ye-Wifi yesihambeli.
Ungaguqula futhi ushintshe lezi zilungiselelo ngemuva kokungena ngemvume ekhasini le-admin lomzila wakho elingekheli le-IP 192.168.8.1. Nokungena ngemvume kukheli le-IP 192.168.8.1, udinga ukubhala ikheli lekheli le-IP http://192.168.8.1 esipheqululini sakho noma chofoza ukufinyelela ukusekelwa komqondisi we-router yakho ekhelini le-IP 192.168.8.1.
Kufanele ulungiselele futhi i-router yakho ukuze isetshenziswe ngokunethezeka. Kunezilungiselelo eziningi ezingasethwa kuphaneli yokuphatha ye-router. Ungafunda kabanzi kusixhumi esibonakalayo sewebhu.
Uhlu lwegama lomsebenzisi nephasiwedi ye-192.168.8.1
HUAWEI TMAR # HWMT8007079 (akekho)
HUAWEI umsebenzisi umsebenzisi